IKEA Nzvimbo, yakawedzera chokwadi chishandiso chave kuwanikwa cheIOS muUnited States | IPhone nhau
IKEA Nzvimbo, yakawedzera chokwadi chishandiso chave kuwanikwa cheIOS muUnited States
Takatarisana nechishandiso chitsva icho chinoburitswa muAmerican App chitoro uye icho change chatove mukubudirira kwechinguva. Nekuuya kwechokwadi chakawedzerwa kuApple's iPad uye iPhone, iyi IKEA Nzvimbo ichaita kuti zvive nyore kwatiri kutenga fenicha yemumba medu nekuda kwekugona kwe bvunzo fenicha usati watenga.
Zvine musoro kuti tiri kutaura nezve 3D application iyo inotibvumidza isu kuti tione kuti chero fanicha yefemu yaizotarisa sei mumba medu. Tine sarudzo dzakawanda uye dzakawanda dzinowanikwa neicho chakawedzerwa uye yedu iPhone nePadad, ichi ndicho chimwe chezvishandiso zvinoshandisa tekinoroji iyi uye zvakanaka Chokwadi inovaraidza kanopfuura kamwe kuyedza mhando dzese dzemidziyo kumba.
Ona kuti midziyo inotaridzika sei usati watenga
Hapana mubvunzo kuti izano rakanaka kwazvo kune avo vasina chokwadi chekuti varai, masitayera kana saizi yekusarudzira fenicha yavo. Kuve neiyi nyowani IKEA app isu inobvumidza kufunga zvakare zano rekutanga uye kunyange kugadzirisa sarudzo yataive nayo pakutanga, iyo inogona zvakare kuve inovaraidza "yemibvunzo mutambo" yekusarudza imba kana hofisi fenicha. Zvirokwazvo anopfuura mumwe achapedza nguva akatarisa pane hombe katarogu yezvigadzirwa izvo nyika yeSweden yemarudzi akawanda inayo.
Hapana mubvunzo kuti iyi sarudzo yakanaka kwazvo uye zvinoita senge inonakidza nzira yekushandisa iyi AR yatinayo muIOS 11. Dambudziko mune ino kesi nderekuti iyo nyowani application yatangwa nhasi, IKEA Nzvimbo, inowanikwa chete mu Chitoro cheAmerican, ndinovimba ichakurumidza kupararira kune dzimwe nyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » IKEA Nzvimbo, yakawedzera chokwadi chishandiso chave kuwanikwa cheIOS muUnited States
Google Mifananidzo izvozvi inotsigira iyo nyowani iOS 11 vhidhiyo fomati